Na-agbake site na Google Panda | Martech Zone
Otutu ụlọ ọrụ ndị m maara merụrụ ahụ site na mgbanwe algorithm aha ya panda. A na-elekwasị anya Panda na ezubere iche ala ubi ma nwere metụtara ọtụtụ ụlọ ọrụ. Otu enyi m kwesịrị ịkwụsị onye ọrụ ya nke mbụ n'ihi ọnwụ ha n'ọkwa na ọrụ ndekọ aha ndị ọkachamara nke dugara n'ọkwá ahụ ihe dị ka afọ iri. Taa, anyị kwụsịrị mmekọrịta anyị na otu n'ime ndị ahịa kachasị amasị anyị. A ga-emezigharị nnukwu mbibi ha na ịnweta mgbasa ozi (anyị ga-anọgide na-akwado ha ebe ọ bụ na enweghị m obi abụọ na okporo ụzọ ha ga-alaghachi).
M zutere na ahịa taa na ụlọ bụ Ichi sober. Ha na-enwe nrụgide dị ukwuu iji nọgide na-eto eto, yabụ ndọghachi azụ dị ka nke a bụ nnukwu. Luckily, ha ngwaahịa bụ nnọọ na-ekere òkè, otú ahụ ka m na-atụ aro ka ha lelee anya gamification na-ha ravenous Fans na ike ikuku ebe ha na-nọgidere na-utịp na ghọtara maka tinye n'ọrụ ọrụ ha na-enye.
N’okwu njikarịcha nchọta ahụ, okwu ahụ siri ike karịa. Mgbe Google nwere mmasị n'ubi ọdịnaya, anyị kpaliri akụrụngwa iji bipụta ọdịnaya ihu. Otu isiokwu dị na ngwa agha ha nwere ike ịnwe peeji 22,000 n'okpuru ya - anyị wekwaa ha niile. Saịtị ahụ buru ibu, mana leve Google dabara adaba - oke ikuku na ego na ego.
Tupu Panda (Google ka na-aga n'ihu tweak), ọ dị mfe ibipụta ọdịnaya ọhụrụ ma nwee ọdịnaya ahụ nke ọma. O yiri ka ọ dị mma na ọkwa ụfọdụ metụtara ikike gị ibipụta ọdịnaya ma debe ya na isiokwu ndị na - esote - ọbụlagodi na ha adịghị mkpa. Ọ bụghịkwa ọzọ.
Mgbe Panda gachara, algorithm pụtara ka etinye ya. Ibe ọ bụla dị na saịtị ahụ nke na-enweghị ọkwa ma ọ bụ na-ebugharị okporo ụzọ ghọrọ n'ezie nnukwu ibu nke dọkpụrụ saịtị ahụ dum. Ruo ọnwa 4 ozugbo anyị lere saịtị ahụ na-aga n'ihu - ọ bụghị naanị na ogo, kama ọ bụ karịa na isiokwu ndị nyere ọtụtụ mpịakọta ọchụchọ. Adịghị mma.
Ya mere, gịnị ka ụlọ ọrụ Google Panda algorithm merụrụ ahụ -eme ihe ozo?
Bibie peeji nke inu. Mpempe akwụkwọ na-abaghị uru na-enweghị obere uru, ọdịnaya na-adịghị mma, mmetụta dị ala na ogo dị ala na-adọta nnukwu peeji nke saịtị gị. Bibie ha ugbu a.
Y’oburu n’inwere ihe omimi nke ugbo… nke putara na otutu uzo agaghi adi n’etiti ulo obibi gi na peeji di ala na saịtị gi th echeghari ndi isi gi echiche. Kama ibipụta nnukwu ọdịnaya gị n'ime isiokwu ogologo-ọdụ tail daa ya n'ime obere ozi. Ihe Nlereanya: Ọ bụrụ na m nwere saịtị na ịzụ ahịa na ọdụ ogologo bụ otu esi ahazi na Google… kama ịnwe otu peeji na otu esi aha on google, enwere m ike ịnwe ihu akwụkwọ na Marketing na Google na-agwakọta karịa nke ọdịnaya n'ime subgroup nwere ọgụgụ isi.
Gaa n'ihu na-akwalite nnukwu peeji nke yana ogo dị mma ị nwere. Iji nagide ibu nke ibe na-emeghị nke ọma, ịkwesịrị ịga n'ihu na-akwalite ibe dị na saịtị gị nke na - eme nke ọma - naanị iji kwado ogo ha.
Mee akụkụ ndị ọzọ nke SEO n'enweghị ntụpọ - gụnyere robots.txt, sitemaps.xml, pinging, iwu ụlọ, wdg. Enwekwaghị oke ọ bụla maka njehie ma ọ bụ nkụda mmụọ na mpaghara ọdịnaya gị. Kwụsị ime ngọpụ ma mezie saịtị gị. Idozi ogo, nnochite anya, ọsọ… ihe niile gbasara ya.
Ugbo ala abughi ihe ojoo (Google ka hu Wikipedia). Na-agba ọsọ na saịtị nke na-erite uru na engines ọchụchọ ma na-enye ọtụtụ nnukwu, ọdịnaya dị mkpa abụghị ihe ọjọọ. Ndị ahịa na-enwe ekele maka ọdịnaya dị mma (ọbụlagodi na Panda leghaara ya anya). Rungba ọsọ na-enwe ihe isi ike siri ike kemgbe Panda, n'agbanyeghị, n'ihi na ugbu a, ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ị na-emepụta na-ezute ọtụtụ echiche na-adịghị mma na ihe ị na-achọ inweta.
Debanye mgbasa ozi ọha na eze maka mmụba na nkwalite, yana itinye usoro ntinye aka ndị ọrụ ndị ọzọ dịka email, nurturing and gamification, nwere ike iburu nnukwu ndị ọbịa ma meghee oghere gị site na ịtụgharị ha ka ha bụrụ ndị ọbịa ọzọ.
Apr 23, 2011 na 10: 14 PM
Ya mere, ọzọ ya niile na-abịa ala n'elu mma n'elu nke ukwu.
Apr 23, 2011 na 10: 42 PM
N'ezie, ọ bụ nguzozi, Atul. Otu post zuru oke nwere ike ree ihe ole na ole… mana ọgu narị post ga-ere karịa. Vingzụta ọtụtụ ihe dị na crappy na-ewetara ndị ọbịa saịtị ahụ mgbe niile - mana enwere m obi abụọ na ọ gbanwere ego ọ ga-enwe
Apr 29, 2011 na 3: 54 PM
Ikwesiri icheta na google na-akwụghachi ụgwọ saịtị ndị a na-akwụ ụgwọ kachasị elu, ọ bụ ya mere saịtị ịgba egwu na-erite uru ugbu a n'ụzọ dị ukwuu.
Jul 4, 2011 na 9: 42 AM
Nke a bụ ezigbo ederede. Saịtị m HostingPost.com bụ nnukwu nnukwu forums mana wee kụrụ ezigbo ike, dobe 90% ma ka na-ahapụ… M ka na-arụrịta ụka ma ọ bụrụ na m chọrọ ịnwale ihe ọzọ kpamkpam. Daalụ
Jun 21, 2012 na 12:09 AM
Ọnụ ego bounce na-eme ihe onye na - agụ ya
na blog gị. Nke ahụ bụ, olee ọkwa ha gụrụ mgbe ha
rutere na ebe obibi gị. Ọ bụrụ na ndị mmadụ nwere ike iwepụtakwu oge na gị
blog, nke a dị mma na anya Google.
Oge ikpeazu m lere ọnụego m nwere iji Google Analytics, ọ bụ
56%. Na ọkwa dị mkpa, nke a na-agba ume mana m ka nwere ọtụtụ
rụọ ọrụ iji belata pasent.
Mee ala ọnụego dị mma maka blọgụ gị. Ọ bụrụ na ibiaghachi gị
ọnụego dabara n'ime 50 - 100%, ọ ga-akara gị mma ịmalite ide ọdịnaya
nke ahụ ga-enyere ndị na-agụ ya aka n’ụzọ pụrụ iche. Nwere ike ikwu mkpa posts
ma gbaa ume.
Jul 6, 2012 na 9: 05 AM
Nnukwu edemede, echere m na Panda, Google na-anwa ikpochapụ onye SEO ọ bụla nwere ike nyere aka nweta ezigbo ọkwa na-ejighi Adwords. Echere m n'onwe m na ha were obere obere, echere m na ha na-anwa ịpịpụta penny ọ bụla na ndị mmadụ na ịntanetị. Ha chọrọ ime ya niile na mberede.
Jul 28, 2012 na 10:51 PM
Na eziokwu niile, mgbe m lechara saịtị gị, echere m na m ga-arụ ọrụ na itinye usoro njikwa ọdịnaya mara na mbubata ọdịnaya gị. Echere m na ị nwere ike ịta ahụhụ n'ihi ọtụtụ njikọ na ibe.